Omenala Championship mgbanaka na mgbanaka Klas, Ndị na-emepụta Omenala | Ọla Byer
Ihe mgbanaka kacha mma bụ ndị na-emepụta mgbanaka kachasị mma.
Mgbaaka Ndị Agha
Ngwaahịa ndị bụ isi
Byer ọla rụpụta Manufacture Limited. bụ ihe kasị mma ọla factory na China, anyị pụrụ iche na omenala mgbanaka n'ichepụta. Ngwaahịa anyị gụnyere mgbanaka Championship, mgbanaka klaasị, mgbaaka ndị agha, mgbanaka mgbaaka na Masonic Ring. Inye Ọrụ Omenala, Nke a, kpọtụrụ anyị.
Omenala Championship mgbanaka
Ndị ọkachamara ọkachamara anyị nwere ike ịme ihe osise 3D n'efu dị ka arịrịọ ndị ahịa n'ime awa 12 ma mee mgbanwe n'oge. Omenala dị iche iche play aha, nọmba na ọnọdụ dị maka anyị. Anyị nwekwara ike ịhazi okwute n'ụdị na agba dị iche iche.
Omenala Klaasị Omenala
you're na-achọ mgbanaka maka onwe gị ma ọ bụ ndị otu gị Anyị nwere ike inyere gị aka iwepụta nke ahụ. Ndị otu anyị ga - arụ ọrụ ga - eso gị rụọ ọrụ iji mepụta otu nka. Nwere ike hazie aha ụlọ akwụkwọ, aha ụmụ akwụkwọ na afọ ngụsị akwụkwọ na mgbanaka.
Omenala Ndị Agha Omenala maka ụmụ nwoke
Ihe nnọchianya nke ebube na mmezu nke ndị otu gị, bịa soro anyị kee mgbanaka pụrụ iche. Nwere ike ịnwe akara nke gị na mgbanaka ahụ.
Omenala Akara Mgba
Areyou na- na -echerefora maka na -echetaonyeonyeamamaka a. Ourexpert chọrọ iru oru. Can nwere ike nwekọtara aha ha, yearandspeciallogoonye ọzọ.
Ọ bụrụ na ị na-achọ mgbanaka maka onwe gị ma ọ bụ otu ndị pụrụ iche, anyị emeela ka ị kpuchie. Anyị ọkachamara 3D imewe otu ga-arụ ọrụ gị ike a pụrụ iche a haziri maka gị.
1. Họrọ otu ndebiri.
2. Zitere anyị akara ngosi gị gwa anyị ebe ịchọrọ itinye akara ngosi.
3. Anyị nwere ike ịme gị aghụghọ 3D.
4. Zitere gị akwụkwọ ọnụahịa mgbe ị kwadoro imewe ahụ.
5. Production mgbe ugwo.
6. Ọrụ Omenala Pụrụ Iche
Guzosie ike na 2006, ByerJewelry bụ onye isi na-emepụta ihe eji eme ihe eji emepụta ọla, imepụta na ire ahịa na China. Main ngwaahịa gụnyere Championship yiri mgbaaka, Military yiri mgbaaka, Class yiri mgbaaka, Masonic yiri mgbaaka, Company yiri mgbaaka na na. Custom omenala dị iche iche play aha, nọmba na ọnọdụ dị maka anyị. Anyị nwekwara ike ịhazi okwute n'ụdị na agba dị iche iche.
Anyị nwere ụlọ ọrụ ọkachamara anyị
Factorylọ ọrụ anyị na-emepụta mgbanaka onye mmeri, mgbanaka klaasị na ihe ndị ọzọ
Anyị nwere ndị ọrụ 3Ddesign ọkachamara
Ndị na-emepụta anyị nwere ike ịnye ihe osise 3d n'efu n'ime oge 4 maka nkwenye ndị ahịa.
Anyị na-anabata nhazi pụrụ iche
Ihe yiri mgbaaka anyị nwere ike ịhazi aha ọkpụkpọ dị iche iche, Mba POS, na nkume pụrụ iche.
Anyị nwere ike ịme mgbanwe pụrụ iche ma ọ bụrụ na i zighi ezi
Aha onye ọkpụkpọ aha, Mba. POS., Nha mkpịsị aka, ịde ihe adịghị mma, anyị nwere ike idozi ya
Ọkachamara 3D Design Team.
Guzosie ike na 2006, Byer Jewelry Limited bụ onye isi na-emepụta ihe eji eme ihe eji emepụta ọla, imepụta na ire ahịa na China, Ngwaahịa ndị a gụnyere mgbanaka Championship, mgbaaka ndị agha, mgbaaka klaasị, mgbaaka Masonic, Mgbanaka ụlọ ọrụ na ihe ndị ọzọ. Isi ihe: 18K, 14K, 10K gold, ọlaọcha, ọla, igwe anaghị agba nchara, alloy, Nwere ike ịhọrọ nkume CZ, diamond, nkume artificial.
Otu ndi otu ndi okacha amara nwere ike imeputa ihe osise 3D n’enweghi ike ichoro ndi ahia n’oge awa iri na abuo ma mee mgbanwe maka nkwenye ndi ahia. Ndị ọkachamara anyị nwere nkà nwere ike ịme aha dị iche iche, Number, POS, okwute pụrụ iche, pantone enamel na wdg. Nke ọ bụla mgbanaka dịka arịrịọ ndị ahịa. Anyị nwekwara ọkachamara QA, QC otu ma mee ụkpụrụ QC zuru ezu, mgbanaka ọ bụla na-enyocha otu n'otu iji hụ na ịdị elu dị elu tupu ebupu, ma mejuo ndị ahịa ọ bụla.
Naanị hapụ email ma ọ bụ akara ekwentị gị na ụdị kọntaktị ka anyị wee zitere gị ọnụego efu maka ụdị atụmatụ anyị dị iche iche!